Xiyyaara Iraan: Misaa'eelli Tor-M1 jedhamu xiyyaara Yukireenitti akka haleelame Iraan mirkaneessite - BBC News Afaan Oromoo
Xiyyaara Iraan: Misaa'eelli Tor-M1 jedhamu xiyyaara Yukireenitti akka haleelame Iraan mirkaneessite
Miisaa'eeloonni xiyyaara Yukireen haleelan lamaan miisaa'eeloota Raashiyaatti hojjataman kan Tor-M1 jedhaman akka ta'e Iraan mirkaneessite.
Dhaabbanni Siiviil Aveeyiishinii Iraan miisaa'eelonni Raashiyaatti hojjataman kunneen kaabarraa furguggifame.
Loltoonni Iraan xiyyaara Yukireen imaltoota 176 qabatee Amajjii 8 imalaa ture dogoggoraan rukutame jedhan.
Guyyoota sadi haleellaan eega raawwate booda haalaa kan turan yoo ta'u Dhaabbanni Siivil Aveeyiishinii Iraan rakkoon teeknikaa mudachuu danda'a jedhee ture.
Iraan nama viidiyoo haleellaa xiyyaara Yukireen waraabe to'atte
Humni waraanaa Iraan hangam jabaadha?
Xiyyaarri Yukireen 'dogongoraan' rukutamee kufuu Iraan amante
Haa ta'uu malee eegdoonni Iraan akka jedhanitti oppireetarri xiyyaara Boeing 737-800 dogoggoraan miisaa'eela Ameerikaa se'ee haleele jedhu.
Humni ittisa qilleensarraa Iraan yeroo sanatti Ameerikaan jeneeraal Qaasim Soleemaanii haleellaa qilleensaarraatiin waan ajjeefateef si'aa'innaan of eeggachaa ture.
Qorannoon hamma ammatti jiru maal fakkaata?
Gabaasni marroo lammaffaarratti xiyyaarichi miisaa'eelli Tor-M1 jedhamuun akka haleelame Dhaabbanni Siivil Aveeyiishinii Iraan mirkaneesseera. Miisaa'eela kana 'Nato'n SA-15 "Gauntlet" jechuudhaan waama.
Haa ta'uu malee gabaasichi qeeqa haleellaa miisaa'eelichaa dhiisuun akkas jedha "dhiibbaan miisaa'elichi geessiseefi xiinxalli gochichaa qoratamaa jira."
Viidiyoo marsaalee hawaasummaarratti namoonni waliif qoodaa turan akka agarsiisutti xiyyaarichi sekoondii 23 keessatti miisaa'ela lamaan rukutamee ture.
Gabaasni Dhaabbata Siivil Aveeyiishinii Iraan akka jedhetti qorattoonni Iraan odeeffannoo xiyyaarichaafi waraabbi sagalee "black boxes" jedhamu hubachuuf "akka rakkatanii" ibsa.
Achi booda gaafii gargaarsa meeshaa ittiin qoratanii dhaabbata Faransaayii BEA jedhamuufi dhaabbata Ameerikaa tokkoof dhiheessaniiru. Ta'us garuu dhaabbilee lameen "hamma ammaatti deebii hin kennine " jedha Dhaabbata Siivil Aveeyiishinii Iraan.
"Meeshaan gahaan yoo nuu dhiyaate odeeffannoo fudhannee yeroo gabaabaa keessatti waan hunda ni xumurra," jedhan.
Boeing 737-800 diizaayiin isaa Ameerikaa keessatti yoo ta'u motorri xiyyaarichaa immoo dhaabbata 'Safran and General' kan qabeenyummaansaa Faransaayi-Ameerikaa ta'een hojjatame.
Biyyoonni biraa maal jedhan?
Bakka bu'oonni Yukireeniifi biyyoota afur taatee kanaan lammiileesaanii dhaban- Kaanaadaa, Iswiidin, Afgaanistaanfi UK Iraan qorannicharratti qorattoota biyyoota biraa waliin walii galuushee himaniiru.
Dabalataanis "Iraan nageenyummaa idiladdunyaawaaf jettee hayyamuunshee baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas beenyaa kaffaluudhaan itti gaafatamumaa guutuu fudhachuu qabdi."
Gaafa Sanbataa hogganaan Dhaabbata Siivil Ayiiveeshinii Iraan Hasan Reezaayifar 'black boxes' qorannoodhaaf gara Yukireen ergamuu akka danda'u himaniiru. Ta'us garuu guyyaa itti aanu Obbo Hasan miidiyaa biyyaalessaa, Iraan irratti akkas jedhan: "Nuti 'black box' erguuf karoora hin qabnu."
MM Kaanaadaa Justin Trudeau Iraan 'block box' qorachuudhaaf humna teeknooloojis ta'e ogeeyyootaa hin qabdu jedhan.
"Hawaasa idil addunyaa biratti qorannoo akkanaa geggessuuf Faransaay wayyaa qabdi kanaaf Iraan garas akka ergituuf Iraan irratti dhiibbaa ni goodhan," jedhan.
Balaa xiyyaara Iraan: Lammiileen Iraan mootummaasaanii ' ni sobdan' jechuun morman
12 Amajjii 2020
Haleellaa Xiyyaara Iraan: Namni haleellaa xiyyaara Yukireen viidiyoo waraabe to'atame
Qaasem Solemaanii: Humni waraanaa Iraan hangam jabaadha?
Keeniyaa dhuguma hir'inni dhiigaa mudateeraa?
Barattoonni laguurra akka hinjirre mirkanneessuuf uffata akka baafataniif dirqisiifaman
Namtichi viidiyoo iccitii quunnamtii saalaa michuu Maakroon saaxile to'atame